Madaxwayne Ka Shaqayn Kari La’ Mucaarid Tiro-yar Kana Awood Badan Xisbul-xaakimka – Heemaal News Network
Madaxwayne Ka Shaqayn Kari La’ Mucaarid Tiro-yar Kana Awood Badan Xisbul-xaakimka
Mucaaridka sumadiisu tahay midabka Casaanka ah ee dalka Koonfur Africa ayaa laf dhuun-gashay ku noqday madaxwaynaha dalkaas, waxana ay u muuqdaan kuwo waxbadan curyaaminaya fulinta qorshayaashiisa uu ku samato bixinayo dalkan waqti ahaan jiray mid ka mid ah kuwa ugu dhaqaalaha wanaagsan Africa.
Isku dhacii u dambeeyay ee Madaxwayne Cyril Ramaphosa iyo Mucaarida luqunka uga maran ayaa waxa uu sababay in Khudbaddii dastuuriga ahayd ee uu madaxwaynahu ka jeedin lahaa baarlamaanka dib loo dhigo mudo saacado ah kadib markii ay carqaladeeyeen xildhibaanada xisbiga mucaaridka ah ee (EFF) iyo hogaamiyahooda mayalka adag eeJulius Malema., kuwaas oo ugu dambeyntii iyaga oo ku orinaya iskaga baxay kulankii baarlamaanka.
Madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa intii uu waday khudbada ka digay in waddankiisa uu wajahayo xaqiiqo qalafsan oo hoos u dhac dhaqaale iyo shaqo la’aanta sii kordheysa ah mustaqbalka dhaw, hadii aan wax laga badalin tubta uu dalku ku jihaysan yahay, iyo habdhaqanka siyaasiyiinta mucaaridka ah ee noqday kuwo ka awood badan xisbul-xaakimkii Aqlabadiyada baarlamaanka lehaa.
Mr Ramaphosa oo wali ah nin caan ah, kalsooni balaadhana ku leh gudaha South Africa ayaa sidoo kale madax uah xisbi aad u kala qeybsan, oo aan kaga filnayn inay iskaga gudbaan Mucaaridka codka dheer, waxana suura gal ah in madaxwaynahu uu iskii ula halgamo sidii loo meel marin lahaa qorshihiisa hamiga fog ee uu doonayo inuu dalkiisa ku badbaadiyo.
Xukuumada Biixi Oo Bilowday Diiwaan-galinta Qaxootiga ku Sugan Somaliland.
Bayle Oo ka Waramay Dadaalada Dayn-cafinta Ee ay IMF & Wold Bank Xaqiijiyeen.